EA020 - OMG Wireless Motion Sensor Pager - Rafitra fanairana ho an'ny trano - $ 168 | Vahaolana OMG
Mahaiza Mampiasa Alam-panahy!
Tsy misy tabataba ao amin'ny efitrano!
Ny Alzera Motion Sensor Exit Alzera dia manafoana ny tabataba eo am-pandriana na ao anaty efitrano, izay mety ho mahasosotra ny mponina fa tsy fampandrenesana fotsiny ilay mpanome amin'ny alalan'ny pager.
Mpitily voamarina amin'ny pager
Ny Smart Caregiver EA020 Caregiver Pager Miaraka amin'ny Motion Sensor Alarm ho an'ny zokiolona dia mampitandrina ny mpikarakara ny hetsiky ny mponina amin'ny alàlan'ny pager raha misy olona saika hifoha avy eo am-pandriana, seza na hiala ny efitrano.
Apetraho amin'izay ilanao izany
Powered by (3) AA batteries (tsy tafiditra ao anatiny) na angona fanampiny AC ny Alarm Sensor Motion dia azo apetraka eo akaikin'ny fandriana na amin'ny varavarana. Rehefa hita ny sehatry ny sensor dia manetsika ny hetsika ny pager - mampahafantatra ilay mpanome.
Mangina - Tsy misy mpanara-maso mandresy
Mora manangana - Mampidira pilina ary vonona hampiasaina
Pocket pied kajera - mora mitondra
Ny Alam-pahazotoana mivoatra dia azo apetraka amin'ny fandriana na varavarana mba hanaraha-maso ny hetsika ataon'ny mponina
17203 Total Views 9 Views Today